သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက် (Myanmar e-President Portal) တင်ထားပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက် (Myanmar e-President Portal) တင်ထားပြီ
သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက် (Myanmar e-President Portal) တင်ထားပြီ
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on May 11, 2012 in News, Press Announcements | 19 comments
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သတင်းများကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ စတင်လွှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြားတာကို မန္တလေး ဂေဇက်မှာ တဆင့်ပြန်လည် ကြေညာမောင်းခပ်အပ်ပါသည်။
၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် အဖွင့်စာမျက်နှာ၊ မိန့်ကြားချက်၊ အခန်းကဏ္ဍ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အစိုးရအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်ကဏ္ဍ စသည့် ကဏ္ဍခွဲများပါရှိပါတယ်..
Latest News ဆိုတဲ့ လင့်ခ်မှာတော့ ယနေ့ နံနက်ပိုင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် သော အစည်းအဝေး သတင်းအား ဖော်ပြပါ ဆိုက်တွင် လွှင့်တင်ထားပြီးဖြစ်၍ စိတ်ဝင်စားသူများ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
P.S.. တလက်စတည်း (Government Websites) ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်များ ကိုလည်း သိရသလောက် တပါတည်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ လို အပ် လျှင် အ သုံး တည့် လိမ့် မည် ဟု မျှော် လင့် ရ ပါ သည် ….
(Ministry of Livestock-Fisheries)
မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာန
(Ministry of Agriculature and Irrigation)
(Ministry of Hotel and Tourism)
(Ministry of Culture )
(Myanmar Posts and Telecommunications )
(Ministry of Finance and Revenue)
(Ministry of Forestry )
(Ministry of Immigration & Population )
(Ministry of Information Committee)
(Social Welfare, Relife and Resettlement)
(Progress of order Areas and National Races and Development Affairs)
credict: (၁) http://www.president-office.gov.mm/briefing-room/daily-news
၀င်ကြည့်တာ ပြင်နေပါတယ်တဲ့ အေ… ပြင်တုန်းဆင်တုန်းနေမှာပေါ့ စောင့်ကြည့်မယ် နော် ကိုကြီးရွာစားကျော်
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများ အစွမ်းတော့ ဖြစ်တော့မယ်
တင်တာမှ ကြာသေးဝူး.. ပြန်ပြင်နေဘီတဲ့
ပို့စ်တင်နေတုန်းကို ရသေးတယ် printscreen လုပ်ပီး ပုံနဲ့ပါတင်မလို့ဟာ ကွန်မကောင်းတာနဲ့ ချန်ထားခဲ့ရတာ..
Myanmar President Office is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.Thank You!
ပို့စ်ကို ပုံနှင့်တကွ update လုပ်လိုက်ပါပြီ..
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်လေ ၊ နောက်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ တွေ ၊ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကို အဆက်မပြတ် လေ့လာလို့ ရတော့မှာပေါ့ အေ ။ ကောင်းပါတယ် ဗျို့ 
အက်ဆက်တွေ မဒနိုင်းရင်တော့ ကောင်းထှာပေါ့အေ …
ဒေါ့အမ်မ်အမ်မ် ရဲ့ ဆားဗစ် လေးတာတော့ မပြောနဲ့
သူတို့ကိုယ်တိုင်ကို တင်ပြီးသားသတင်းတွေ သုံး လေးခါ တင်မိထားလို့ထား..
တင်လိုက် ပြုတ်ကျလိုက် ဖြစ်နေပုံရတယ်
လွတ်လပ်စွာ သတင်းတွေကိုရေးသားခွင့်ရသွားတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ဘာသတင်းမှ သိရမှာမဟုတ်ဘူး
အစချီ သော စာများ တန်းစီ ထားပါကြောင်း၊
ဆက်သွယ်ပို့လွှတ်လို့ရမည့်အချိန် သိ ကြ သူများ ကျေးဇူးပြုပြီး လက်တို့ပေးစေလိုပါတယ်။
င တို့ သမတကြီး ထံ အမြန်ဆက်သွယ်ရနိုင်သော နည်းလမ်းများ ရှာကြံ ကြကုန်လော့။
Log in or register to post comments တဲ့ပါတယ်
အရေးတယူ ဖတ်ပေးမပေးတော့ ပြောတတ်ဘူး..
အဲဗာ မိန်းတိန်းကို နက်နေကြတော့ ဘယ်တော့များမှ ကြည့်ရမှာလဲ……
ဟန်ဆောင်ရပြီ…အပြုံးလေးနဲ့ လိမ်ကြပြီ ။ ။
ယခု ညနေ ၆နာရီ မှာဝင်ကြည့်တာ တနေ့အတွင်း ၃ ခုမြောက် အပြင်အဆင်နဲ့ တတ်လာတယ်ဗျ
ကောင်းတယ် ကိုရွာစားကျော်ရေ. ခုလိုဝေမျှေးလို့ ပါနောက် အသုံးတည့်မှာပါဗျ။
မြန်မာ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြည့်ချင်၊ ရှာချင်ရင် ..
ဒီနေရာမှာ ရနိုင်ပါဂျောင်း …
ရုံးမှာ အက်မင်က စီးပွါးကူးသန်းမှာ အိုင်စီ ရှောက်ဖို့ နေပြည်တော်သွားတိုင်း
စီးပွါးကူးသန်းက ၀က်ဆိုက်မှာ မန်ဘာဝင်ထားတာကို
ရုံးက အကြမ်းရေးပေးတဲ့ ပရိုဖိုင်တွေကိုဝင်ဖြည့်ပေးရတာတဲ့
အဲဒီအတွက် အွန်လိုင်းခ 5000 ပေးရတယ်ဆိုပဲ
အပြင်မှာ အွန်လိုင်းနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ၀င်ရိုက်လို့မရဘူးလားမေးတော့
သူတို့ကပဲ မန်ဘာဖွင့် အကောင့်ဝင်ပြီး ၀င်ရိုက်ပေးရတာဆိုပဲ
သူတို့ စားဖို့အတွက် ရန်ကုန်က လူတွေက နေပြည်တော်ပြေးပြီး အွန်လိုင်း တခါတခါ လာလာဝင်ရတယ်ပြောဒယ်